Mashups: Esi inokuba zizilogeni zeempawu ezaziwayo ukuba bezinyanisekile | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Mashups: Yile ndlela iziqubulo zeyona nto idume ngayo xa beyinyanisile
Intengiso ibisoloko inxulunyaniswa nokuphathwa kolwazi ngeenjongo zorhwebo ukufezekisa ukwamkelwa okukhulu kunye nempumelelo phakathi kwabantu. Kolu shishino, lumalunga nokwenza iimfuno kumthengi kwaye emva koko uzanelise kwaye esi sisicwangciso sonxibelelwano. Imalunga nokunyusa amaxabiso kunye nokulunga kwemveliso okanye uphawu kunye nokunciphisa iimpazamo okanye iziphene. Oku kuyenza yonke ingqiqo, kodwa kuthekani ukuba usuku olunye singafumana ukwehla kweemveliso zabo kwizilogeni zeemveliso esizithandayo? Inokuba nefuthe lini ekuthandeni kwayo nakwisigqibo sokuthenga kwethu? Ezi mashup ziyazithethela!
Lo ngumbuzo obuziweyo ukusukela ekuphumeni kwentsholongwane kwaye baphendule ngeemashup ezithile ezinomtsalane ezineempawu ezifana neNetflix, iActivia, iCrayola, iLogo, iMonopoly, iLinkedin okanye iMfihlo kaVictoria. Ngaphaya kwecandelo elihlekisayo elinazo ezi zindululo, zikwamema ukubonakalisa kwaye ndithatha ithuba lokuqalisa umbuzo onempikiswano: Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka ukubhengeza ngaphandle kokusebenzisa ngobuqhetseba? Ndiyakholelwa ngokobuqu ukuba ngekhe ibekho. Nasiphi na isenzo sonxibelelwano kubandakanya ukhetho lolwazi, ke ukuphathwa gwenxa kuyacaca kunxibelelwano kwaye kunjalo nangakumbi kwiintetho ezikhohlakeleyo. Ukuba sizama ukukholisa umbukeli ukuba kutheni kufuneka ajoyine iqela lethu okanye kutheni kufuneka batye iimveliso zethu, ukusukela kwiminithi engu-zero siya kuba senze ukhetho lolwazi olusekwe ngokucacileyo kwiinqobo ezilungileyo kunye nezibonelelo (zihlala zihambelana ) ukuba umthengi onokubakho uza kufumana nathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Mashups: Yile ndlela iziqubulo zeyona nto idume ngayo xa beyinyanisile
Amagama aguqulwe aba ziilogo ukugxininisa intsingiselo yawo
Ubomi obufihlakeleyo bamaqhawe amaqhawe nguGrégoire Guillemin